Amisom oo digniin ka soo saaray Iney dalka isaga Baxaan Mareyk... | Universal Somali TV
Amisom oo digniin ka soo saaray Iney dalka isaga Baxaan Mareykanka iyadoon laga adkaan Shabaab.
Iyada oo uu socdo qorshe Mareykanku ku doonayo in uu ku dhimo Ciidanka ka joogo Afrika ayaa arrintaas waxaa walaac ka muujiyay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Jen. Paul Lokech, oo ah Taliyaha Ciidanka Uganda ee Soomaaliya ayaa sheegay in waddan kasta oo ku lug leh howlgalka amni soo celinta Soomaaliya uu kaalin leeyahay,waddankii ka baxana aanay jirin cid kaalintiisa buuxin karta.
Waxaa uu hadalkan sheegay iyada oo Jimcihii la soo dhaafay Askari Mareykan ah lagu dilay Koofurt Soomaaliya afar kalena lagu dhaawacay.
Waxaa arrintan bar bar socda dib u eegista Mareykanka uu ku sameynayo Ciidamada ka joogo Afrika ee uu doonayo in tiradooda la dhimo.
Wargeyska Daily Best ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in dhimashada Askariga Mareykanka ah ee Jubbada hoose ay sabab u ahayd kaddib markii Arbacadii hore ay Al-shabaab Wabiga Jubba ku fatihiyeen degaan ay Ciidamada isbaheysanaya doonayeen in ay saldhig ka dhigtaan.
Qof ka mid ah Dadka degaanka Baar Sanguuni oo magaciisa ka gaabsaday ayaa u sheegay Daily Best in dagaal Khamiistii dhex maray Al-shabaab iyo Ciidamada Xulufada ay ku dhimatay Gabar yar oo dadka degaanka ah.
Markii ay Ciidamada Mareykanka,kuwa Soomaalida iyo kenyaankuba ay saldhig KMG ah sameysteenna Biyaha wabigana ku fataheen lagu weeraray Hoobiyayaal sidaasna khasaaraha ku dhashay.
Kan-xigaMadaxweynaha Puntland oo Abuubakar Ca...
Kan-horeRaiisal Wasaaraha Itoobiya oo ku dhaa...
40,705,659 unique visits